Mayelana NATHI - NINGBO ACE MACHINERY Co., Ltd.
Imishini ye-ACE ihlanganisa kahle amandla ne-finesse ukukulethela okuhle kunakho konke kumishini kakhonkolo neyokuxinana. Njengomkhiqizi ohamba phambili waseChina wamathuluzi wokwakha asindayo, singanikeza amaklayenti imishini eyahlukahlukene ezinikele kufaka phakathi iphampu lamanzi, umsiki we-rebar, i-rebar bender, isaha likakhonkolo, kanye nomxube wokhonkolo. Futhi kutholakala ukukhethwa okuphelele kwezinto zokusebenza zikakhonkolo. Kuhle kakhulu ekwakhiweni nasekusekelweni okuyisisekelo, imikhiqizo yethu ivame ukusetshenziselwa izindawo zokusebenza ezifana nemigwaqo, izindlu, amaplaza, ojantshi, nezikhumulo zezindiza.
Amathuluzi e-ACE avunywa ngamazinga embonini afana ne-CE neCCC. Kusukela ngo-2009, izakhiwo zethu zokukhiqiza zicwaningwe minyaka yonke ngabachwepheshe abavela ku-TÜV SÜD Group. Selokhu inethiwekhi yethu yokusabalalisa phesheya yasungulwa ngonyaka we-2005, sivikele izindawo zokuthekelisa ezindaweni ezibandakanya iMelika, i-Afrika, iMpumalanga Yurophu, i-Southeast Asia, iMiddle-East, njll.
Isitifiketi sethu Esithuthukile
Inkampani yethu yahlanganiswa ngo-1995 njengeZhenxing Construction Machinery Factory. Sizimele ngaphakathi kweYinzhou District yeNingbo City, indawo yokuzalwa yamaShayina yezinaliti zesidlidlizi-ukusebenza kwethu kuqale ngokukhethekile kule ngxenye. Cishe ama-2 eminyaka yesipiliyoni sokuhweba kwamanye amazwe asivumele ukuthi sivele njengomkhiqizi ovelele embonini yasekhaya. Impahla yenkampani yethu inwebeka nge-8,000m2 ngenkathi indawo ehlanganisiwe yezakhiwo zethu ifinyelela ku-23,000m2. Ukusondelana nazo zombili iZibuko laseNingbo kanye neLishe International Airport kusinikeza usizo olulula.
Izizathu Zokukhetha i-Ningbo Ace Machinery Co., Ltd
Sinenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-1.3 million RMB kanye nabasebenzi abangaphezu kwe-120 kubandakanya onjiniyela bemikhiqizo abathathu, abaphathi bokukhiqiza aba-3, abaphathi bezinqolobane ezi-4, abaluleki be-QA aba-5, abasebenzi abawu-8, kanye nabasebenzi abanamakhono abangama-95. Ngo-2012, saqopha izimali ezingama-38 million RMB. Ingqalasizinda yenkampani yethu ihlukaniselwe iminyango ezenzele yona ngokukhethekile njengokuthuthuka, ukukhiqiza, ukuhlangana, ukusampula, ukuthuthwa kwendle, ukuqinisekiswa kwekhwalithi kanye nabasebenzi. Ukuphathwa okwenziwe kwaba ngokwakho kusivumela ukuthi senze imvelo esebenzayo isebenze futhi sithuthukise inqubo yokugeleza ngenkathi kulawulwa ngokuqinile uhlelo lokulawula ikhwalithi.